ကွရ်အန်ကဏ္ဍ | Pure Sunni (Ya Robbae Salle Wasllim Ala Mohamadin)
Category Archives: ကွရ်အန်ကဏ္ဍ
ကုရ်အာန် ဘာသာပြန် (၁ မှ ၁၅) http://server1.iloveallaah.com/quran/my_translation_quran_in_burmese_01.pdf ကုရ်အာန် ဘာသာပြန် (၁၆ မှ ၃၀) http://server1.iloveallaah.com/quran/my_translation_quran_in_burmese_02.pdf ဒီနေ့ ညီတစ်ယောက်နဲ့ ဟိုကိစ္စ သည်ကိစ္စတွေ စကားပြောဖြစ်ကြရင်းက အွန်လိုင်းပေါ်က ကုရ်အာန်ဘာသာပြန် အတုတွေအကြောင်းကို သတိထားမိခဲ့တယ်။ ဃာဇီဆပ်ရဲ့နာမည်တွေကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး ကုရ်အာန်ဘာသာပြန်အတုကို လူထုကြားထဲ PDF တွေ ဖြန့်ဝေထားတာ အတော်ကို ပျံ့နှံ့ပြီဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးငါးနှစ်ကတည်းက ဒီဘာသာပြန်အတုတွေကို သတိပြုမိခဲ့ပေမယ့် အခုလောက်ထိ ဖျက်အားပြင်းမယ်ဆိုတာ မရိပ်စားခဲ့မိဘူး။ အခုတော့ ဒင်းတို့ရဲ့ … Continue reading →
Posted in ကွရ်အန်ကဏ္ဍ	| Leaveacomment
Click the Link 1. Al-Fatihah 2. Al-Baqarah 3. ‘Ali `Imran 4. An-Nisa’ 5. Al-Ma’idah 6. Al-‘An`am 7. Al-‘A`raf 8. Al-‘Anfal 9. At-Tawbah 10. Yunus 11. Hud 12. Yusuf 13. Ar-Ra`d 14. ‘Ibrahim 15. Al-Hijr 16. An-Nahl 17. Al-‘Isra’ 18. Al-Kahf … Continue reading →
The Holy Quran The Holy Quran English<->Arabic translation Click under the Link http://www.ikhwa.com/web/quran/
Click under the Link The Holy Quran in Burmese (translations ) Detailed Translation of the Holy Quran in Burmese (Vol. 1) . Detailed Translation of the Holy Quran in Burmese (Vol. 2)